Global Voices teny Malagasy » Alphonse Mucha ilay nanome aingam-panahy mahagaga tamin’ny manga sy ny sarimiaina ary ny “tantara an-tsoratra Japoney” · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 04 Septambra 2019 5:05 GMT 1	 · Mpanoratra Nevin Thompson Nandika Liva Andriamanantena
Ampahany avy amin'ny “Moët syChandon “, (1899) nataon'i Alphone Mucha. Sary niparitaka an-tserasera .
Samy nilaza avokoa ireo mpamorona manga, ny sarimiaina ary eny fa na dia ny mpanoratra” tantara an-tsoratra Japoney ” ao Japana aza fa nanome aingam-panahy azy ireo ilay Tseky mpanao kantovao sady mpamorona sarimiaina tany ampiandohan'ny Taonjato faha-20, araka ny bilaogin'ny kolontsaina pop Japoney Ichi-Up .
Ilay vahiny mpandravaka izay niasa zato taona lasa izay no nanome aingam-panahy ny mpamorona Japoney tamin'ny fomba isankarazany. Alphonse Mucha no anarany.
Araka ny Ichi-Up, samy nahazo aingam-panahy avy amin'i Alfons Mucha  (1860-1939, fantatra amin'ny teny Anglisy ho Alphonse Mucha) avokoa ireo famoronana Japoney malaza anisan'izany ny Fandraketana ny adin'i Lodoss (ロードス島戦記 ), Video Sipa Ai (電影少女 ), GOSICK  ary ny Gundam . Mipoitra matetika any amin'ny kolontsaina pop Japoney rehetra any ny aingam-panahy nomeny.
[…] Hivoaka tsy ho ela ny andiany vaovao amin'ny Dragonquest. Zahao ny tantara an-tsary ahitana ny sarin'i Rubisu amin'ny endrika Alphonse Mucha! […]
Manazava ny antony nahatonga an'i Mucha nanome aingam-panahy ny kolontsaina Japoney amin'izao fotoana izao ny hetsika Art Nouveau  [Kanto vao], izay ahitana an'i Mucha, hetsika izay voataonan'ny Japonisma  nandravarava ny tontolon'ny zavakanto Eorôpeana tany amin'ny faramparan'ny taompolo 1800 ihany koa:
Avy amin'ny anaran'ny trano fampirantiana zavakanto any Frantsa no nangalana ny hoe ‘Art Nouveau’ [kantovao]. Nanohana ny zavakanto Japoney ny trano fampirantiana zavakanto Art Nouveau, indrindra fa ny printy sy ny sokitra ukiyo-e Japoney, ary eo ihany koa ny asakanton'ireo mpanakanto (Eoropeana) voataonan'i Japana.
Nanamarika  [fr] i Markéta Hanova, ilay Tseky Talen'ny Trano Fampirantiana Zavakanto Nasionaly Rakitry ny Zavakanto Tatsinanana :
Voataonan'ny endrin-javakanto Japoney ihany koa i Mucha raha nonina tao Paris. Hitantsika ao amin'ny sariny fa nataony lehibe ny maodelin'ny tiolipa ( ato amin'ity fandravahana ity ). Tazantsika amin'ny alàlan'ireo tiolipa ireo tahaka amin'ny alàlan'ny makarakara ny zavatra iray hafa eny amin'ny faravodilanitra- famoronanana mampiavaka manokana hita amin'ny pirinty Japoney.
Ankoatra ny sarimiaina sy ny manga ary ny tantara an-tsoratra Japoney, mipoitra any amin'ny kolontsaina Japoney hafa ihany koa i Mucha :
Manasongadina ny famoronan'i Alphonse Mucha ny lamba mainty manify ‘haori’ (palitao nentim-paharazana Japoney miendrika kimono lava) izay misy ny ‘haora’ (maodely miafina ao anaty akanjo). […]
Any amin'ny Repoblika Tseky, mbola tsaroana sy ankalazaina hatrany ny aingam-panahy nentin'i Mucha sy ny Art Nouveau tamin'ny kolontsaina famoronana Japoney. Tamin'ny taona 2014  , nisy fampirantiana lehibe tao amin'io firenena io momba ny Japonisma nataon'ireo mpanakanto ara-maso Tseky, anisan'izany i Mucha.
Ankoatra ny aingam-panahy nentiny izay mbola mitohy amin'izao fotoana izao amin'ny kolontsaina pop Japoney dia fonenan'ny iray amin'ireo angondrakitra lehibe indrindra manerantany amin'ny asakanto nataon'i Mucha ihany koa i Japana izay tafiditra ao anatin'ny angondrakitra Ogata sy Doi ao amin'ny Mozean'ny tanàndehiben'i Sakai, akaikin'i Osaka any andrefan'ny Japana.
Aseho ao Tokyo ao Bunkamura amin'izao fotoana izao ny asakanton'i Mucha ary mandra-pahatapitra ny faran'ny volana Septambra 2019 izany. Tsy manasongadina fotsiny ireo fandravahana maro nataon'i Mucha ity fampirantiana “Timeless Mucha: The Mucha to Manga — The Magic of Line ” [Mucha tsy voafetran'ny fotoana: Mucha mankany amin'ny Manga — ny majikan'ny tsipika] ity fa misy ihany koa ireo asakanto isankarazany avy amin'ireo mpanakanto izay nahazo aingam-panahy avy amin'i Mucha. Hitety ireo tanàndehibe maro  manerana an'i Japana amin'ny taona 2020 ity fampirantiana karakarain'ny Orina Mpanasoa Mucha  ity .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/09/04/142881/
 Moët syChandon: http://www.muchafoundation.org/gallery/browse-works/object/52
 tantara an-tsoratra Japoney: https://comicbook.com/anime/2017/02/21/whats-the-difference-between-manga-light-novels-/
 ato amin'ity fandravahana ity: https://img.radio.cz/WLsrIKztTCbLASPT4Hai1BMtZ7o=/fit-in/280x280/1412341193__pictures/c/vystavy/japonismus_mucha.jpg
 tanàndehibe maro: https://www.idnes.cz/kultura/vytvarne-umeni/alfons-mucha-vystava-japonsko-vliv-na-manga-anime.A190725_151219_vytvarne-umeni_ts